बादललाई चे’तावनी,ओलीको पुच्छर भएर माओवादीविरु’द्ध उजुरी हाल्ने तपाइँ को हो ? लाज लाग्दैन ! – Kantipur Np
बादललाई चे’तावनी,ओलीको पुच्छर भएर माओवादीविरु’द्ध उजुरी हाल्ने तपाइँ को हो ? लाज लाग्दैन !
प्रकाशित मिति: आइतबार, आषाढ २७, २०७८ समय: ८:१२:४१
नेकपा माओबादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले पुर्वमाओबादी केन्द्रका नेता तथा एमालेका केन्दिय सदस्य रामबहादुर थापा बादललाई चे’तावनी दिएका छन्। नेता पुनले बादललाई एमालेको केन्द्रिय सदस्य भएर माओबादी केन्द्र अवै’धानिक भन्दै निर्वाचन आयोग जान ला’ज छैन ? भन्दै कडा प्रश्न गरेका छन्।
एक मिडियासंग कुरा गर्दै नेता पुनले माओबादी छाडेका लाज पचेका नेताहरु हामीविरु’द्ध लाग्नु भन्दा आफ्नो पार्टी एमालेलाई राम्रोसंग अगाडी बढाउन आग्रह गरेका छन्। नेता पुनले माओबादी केन्द्रलाई देख्न नसकेर ला’ज पचेका नेताहरु आयोग पुगेको आ’रोप लगाए।
नेता पुनले भने, “माओबादी केन्द्र छाडेका लाज प’चेका नेताहरु अहिले फेरी निर्वाचन आयोग जानलाई लाज छैन ? कहाँ कुन अधिकार खोजेर माओवादी अवैधानिक भन्न खोजेको हो ? अर्काको पार्टीलाई बादलले अवैधानि भन्दैमा खा’रेज हुन्छ भन्ने बादल को हो ?”
“तपाईहरु एमालेका केन्द्रिय सदस्य भइसकेका नेता हुन्। त्यसैले एमाले बनाउन लाग्नुस्। हामीमाथि आखा नलगाए हुन्छ। आफ्नो पार्टी बनाएर जनताको माझ चुनावमा ल’ड़नुस”, पुनले भने, “अब बादलको राजनीति हेर्न बाँकी छ।”
माओवादी केन्द्र अवैधानिक भएको भन्दै पूर्वमाओवादी नेताहरु निर्वाचन आयोगमा उ’जुरी दिन पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्र आयोगमा दर्ता नभएको र त्यसले गरेका का’रबाही वैधानिक नहुने भन्दै पूर्वमाओवादी नेता लीलाबहादुर थापाको नेतृत्वमा दिनेश पन्थी, गिरिधारिलाल न्यौपानेलगायत बुधबार उजुरी दिन अयोग पुगेका हुन् ।
‘दर्ता भएको माओवादी केन्द्र हो भने निर्वाचन आयोगमा पाँच वर्ष नाघिसक्यो । त्यसको महाधिवेशन भएको छैन । त्यसकारण दर्ता नभएको पार्टीले हामीलाई कसरी कारबाही गर्छ ? त्यो वैध हुन्छ कि हुँदैन ?,’ नेता लेखराज भट्टले भने, ‘त्यो दर्ता हो भने पनि महाधिवेशन गरेको छैन । यो दुईवटै विषयमा केन्द्रित भएर हेर्नुपर्छ भनेर हामीबीच आयोगमा उ’जुरी दिने सहमति भएको हो ।’
त्यस्तैगरी नेकपा माओबादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले पुर्वमाओबादी केन्द्रका नेता तथा एमालेका केन्दिय सदस्य रामबहादुर थापा बादललाई चे’तावनी दिएका छन्। नेता प्रभाकरले बादललाई एमालेको केन्द्रिय सदस्य भएर माओबादी केन्द्र अवैधानिक भन्दै निर्वाचन आयोग जान लाज छैन ? भन्दै कडा प्रश्न गरेका छन्।
युवाहरुसंगको एअका अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कुरा गर्दै उहाले माओबादी छाडेका लाज पचेका नेताहरु हामीविरु’द्ध लाग्नु भन्दा आफ्नो पार्टी एमालेलाई राम्रोसंग अगाडी बढाउन आग्रह गरेका छन्।
माओबादी केन्द्रलाई देख्न नसकेर लाज पचेका नेताहरु आयोग पुगेको आरोप लगाए।, “माओबादी केन्द्र छाडेका लाज पचेका नेताहरु अहिले फेरी निर्वाचन आयोग जानलाई लाज छैन रु कहाँ कुन अधिकार खोजेर माओवादी अवैधानिक भन्न खोजेको हो ? अर्काको पार्टीलाई बादलले अवैधानिक भन्दैमा खारेज हुन्छ भन्ने बादल को हो?”
“तपाईहरु एमालेका केन्द्रिय सदस्य भइसकेका नेता हुन्। त्यसैले एमाले बनाउन लाग्नुस्। हामीमाथि आखा नलगाए हुन्छ।आफ्नो पार्टी बनाएर जनताको माझ चुनावमा लड़नुस”, प्रभाकरले भने, “अब बादलको राजनीति हेर्न बाँकी छ।” माओवादी केन्द्र अवैधानिक भएको भन्दै पूर्वमाओवादी नेताहरु निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिन पुगेका थिए ।
Last Updated on: July 11th, 2021 at 8:12 am